DEG DEG: Arsenal Oo La Liga Ku Wareejisay Lacagtii Lagu Burburinayay Heshiiska Thomas Partey, Atletico Madrid Oo Careysan & Wararkii Ugu Danbeeyay - Gool24.Net
DEG DEG: Arsenal Oo La Liga Ku Wareejisay Lacagtii Lagu Burburinayay Heshiiska Thomas Partey, Atletico Madrid Oo Careysan & Wararkii Ugu Danbeeyay
Xiddiga khadka dhexe ee Atletico Madrid ayaa goor dhaweyd ka degay magaalada London isagoo tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Arsenal kuwaasoo bixiyay lacagta lagu burburinayay qandaraaska xiddiga reer Ghana.
Gunners ayaa maamulka horyaalka La Liga ku wareejisay 50 milyan euro oo ah lacagta lagu burburinayo qandaraaska ciyaaryahanka, iyadoo xiddigaan uu u soo duulay Ingariiska si uu u dhameystiro heshiiska.
Maamulka La Liga ayaa haatan ku wargeliyay Atletico Madrid inay Arsenal ka heleen lacagta 50ka milyan euro ee lagu burburinayo qandaraaska Thomas Partey uu kula jiray Atletico.
Inkastoo khabiirka suuqa kala iibsiga Fabrizio Romano uu sheegay in Arsenal ay wargelisay Atletico hadana wararka ka soo baxaya Spain ayaa sheegayay in Arsenal ama ciyaaryahanka aysan xiriir la sameynin Atletico taasoo ka careysiisay kooxda reer Spain.
Madaama Gunners ay bixineyso lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa Arsenal uma baahna inay wadahadal la yeelato Atletico Madrid, iyadoo heshiisyada qandaraas burburinta ay fuliso maamulka horyaalka La Liga.
Arsenal waxay lacagta lagu burburinayo qandaraaska Thomas Partey ku wareejisay maamulka horyaalka La Liga kuwaasoo wakiil ka ah kooxda Atletico Madrid.
Heshiis midkaan aan wax xiriir ah la laheyn ayay Atletico Madrid iyagana amaah kula wareegayaan xiddiga kooxda Arsenal Torreira kaasoo mar sii horeysay tijaabada caafimaadka u maray Atletico.